समाचार – Dainik Pana
कैलाली : लम्कीचुहा नगरपालिकाको कार्यकक्षमा शनिबार राती आगजनी भएको छ । अज्ञात समूहले मेयर महादेव बजगाइको कार्यकक्षमा आगजनी गरेको लम्की प्रहरीले जनाएको छ । मेयरको कार्यकक्षको झ्यालको सिसा फुटाइएको छ भने झ्याल नजिकै एक हतौडा र पेट्रोल भरिएका २ वटा बोत्तल भेटिएका छन् । उनीहरुले झ्यालबाटै फालेको आगो लागेर मेयरको कुर्ची र टेबललगायतमा क्षति पुगेको […]
Posted on September 16, 2019 September 16, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
राज कुमार क्षेत्री हाम्रो देशमा के कुराको कमि छ र ! प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ । यहाँ जल, जमिन र जंगल छन । विभिन्न खनिज पदार्थहरु प्रयाप्त छन । विभिन्न खानिहरु छन र जडिवुटीले भरिपुर्ण छ । गौतम वुद्धको जन्मभुमि हो । सगरमाथाले विश्व सामु चिनाउने सान छ । संसारको धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ हाम्रै […]
Posted on September 15, 2019 September 15, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
भद्रगोल देखि मेरी बास्सैसम्म : नक्कली क्यारेक्टरका सक्कली दुःख !
लोकप्रिय हास्य कलाकार पाँडे उमेरले ३३ वर्षका भए। तर उनले निभाउने क्यारेक्टर ७० आसपासको छ। भद्रगोलमार्फत दर्शकमाझ चिनिएका उनको वास्तविक पहिचान पाँडे पनि हैन, अर्जुन घिमिरे हो। तर उनलाई अर्जुन भनेर कमैले चिन्छन्। ‘भद्रगोल’को पाँडेले उनको वास्तविक परिचय नै खाइदियो। यस्ता पात्र धेरै छन्, नेपाली हास्य क्षेत्रमा। अधिकांश आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा सिरियलकै क्यारेक्टरको भरमा चल्न […]
तरुण दलमा अध्यक्षको बर्खास्ती लगत्तै महासचिवले गरे जवाफी कारबाही
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले एकअर्कालाई संगठनबाट कारबाही गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। संगठनको अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले सदस्यसमेत नरहने गरी महासचिव शाहीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्। त्यसलगत्तै महासचिव शाहीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष बस्नेतलाई संगठनको […]
रबि लामिछानेका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई दबाउन राजनीतिक दलहरू एकमत (विज्ञप्ति)
भदौ २, काठमाडौं । पत्रकार शा’लिकराम पु’डासैनीको आ’त्मह’त्या प्रकरणमा पत्रकार रबि लामिछाने लगायतलाई पक्राउ गरिएपछि भइरहेको प्रदर्शनलाई निरुत्साहित पार्न चितवनका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक हुने भएका छन् । पु’डासैनी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई असर नपार्न र प्रशासनलाई सहयोग गर्नसमेत जिल्लाका प्रमुख दलका नेताहरूले आमजनसमुदायमा अनुरोध गरेका छन् । गत साउन २० गते भरतपुरको कंगारु होटलमा मृत […]
Posted on August 19, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
प्रेम बानियाँ भन्छन, २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा बाँकी भिडियो खोई ?
काठमाडौँ : पत्रकार शालिकराम पुडासैनिले आफुलाई रवि लामिछाने सहित ३ जना आत्मा ह*त्या गर्न वाध्य बनाएको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भए पछी प्रहरीले बिहीवार नै तिनै जनालाई प*क्राउ गरेको छ । न्युज २४ टेलि भिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ बिहीवार नै प*क्राउ गरेको हो । पत्राउ परेका तिनै जनालाई गए […]
Posted on August 16, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
विप्लवको गृहजिल्ला रोल्पामा सरकारी गाडी प्रतिबन्ध !
रोल्पा- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला संगठन समिति रोल्पाले जिल्लाभर सरकारी सवारी साधन आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। केही दिनअघि बसेको पार्टीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पार्टीको मध्यपश्चिम कमान्डको निर्देशन अनुसार जिल्ला पार्टी कमिटीले यस्तो निर्णय गरेको नवनियुक्त जिल्ला सेक्रेटरी मानवले जानकारी दिए। ‘पार्टीको यो निर्णयसँगै अब रोल्पा जिल्लाभर चल्ने सबै […]
Posted on August 14, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
नयाँ अनुहार समाचार
फ्यानहरुको आक्रोस, रबिलाई फसाउदै छन् !
बिनोद त्रिपाठी “प्रतिशोध र मजाकपुर्ण क्रियाकलापले मानिसलाई सत्यताबाट टाढा राख्छ । सोच्न र कल्पना गर्न पनि नसकिने बिषय आरोप लगाएर रवि लामिछाने र उनको टिमलाई तनाव दिँदा मृत्युवरण गर्नेले सच्चा श्रद्धाञ्जली पाउँदैन । मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यो हो जुन सत्यतामा आधारित बिषयमा मात्र बहस हुन्छ । रवि जी अब एक ब्यक्ति मात्र होइनन् ,उनि सिंगो […]
Posted on August 10, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)
विप्लवलाइ जहिले पनि सम्झिरहन्छु, नेकपालाइ दमन गरेर हुदैन वार्ता गर्नुपर्दछ : लेखराज भट्ट
काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले पूर्वएमालेका कारण पार्टी एकतामा ढिलाई भएको बताएका छन्। नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै नेता भट्टले साविकको एमालेमा नेतागत गुट हुँदा एकताले गति लिन नसकेको जिकिर गरे। ‘पार्टी एकता ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। हाम्रो हिजोको माओवादीमा जेसुकै गुट भए पनि अन्तिममा […]
नगरपालिका मेयर र उपमेयर समूहबीच झडप : उपप्रमुखसहित ६ घाइते
जनकपुरधाम : धनुषाको हँसपुर नगरपालिकामा प्रमुख रामज्ञान मण्डल र उपप्रमुख रेणु झाबीचको विवादले उग्ररुप लिएको छ। नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद झडपमा समेत परिणत भएको हो। झडपमा परेर उपप्रमुख रेणु झासहित ६ जना स्थानीय घाइते भएका छन्। नगरपालिकाको बघचौडामा रहेको साबिकको कार्यालयलाई हँसपुर चोकमा सार्ने विषयलाई लिएर दुबै पक्षबीच मंगलबार झडप भएको […]
Posted on August 6, 2019 Author Dainik Pana Comment(0)